Ungakwenza Kanjani Ukucinga Ngezwi Ku-Youtube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungakwenza kanjani ukusesha ngezwi ku-YouTube?
May 12, 2021 0 Comentarios 585
Ipulatifomu ye-YouTube ayikhathali ukusungula nokunikela ngezinto ezintsha kumlandeli ngamunye. Ngalesi sikhathi ifake inketho ye- yenza ukusesha ngezwi ngendlela elula futhi esheshayo. Uma ufuna ukufunda kabanzi ngale ndaba, ungaphambuki esihlokweni esilandelayo.
Ukwenza ukusesha ngezwi ku-YouTube kungenye yemisebenzi yakamuva ukuthi i-YouTube ikufake kokubili esicelweni sayo seselula nakuhlobo lwedeskithophu. Manje ukwenza usesho kule ngxenyekazi kushesha kakhulu futhi kunethezeke ngokwengeziwe. Ngeke kusadingeka ukuthi ubhale ukuthola okunye okuqukethwe.
Sesha ngezwi kuwebhu ye-YouTube
Muva nje, ipulatifomu ye-YouTube ifake phakathi nokwenzeka ukusesha ngezwi ngenguqulo yedeskithophu yayo. Abasebenzisi bathole lesi sibuyekezo esisha kahle, futhi okuhle kunakho konke, ukusebenzisa lesi sici kungenye yezinto ezilula kakhulu esingazenza ngaphakathi kwekhasi.
Sesha ngezwi ku-YouTube kwenza izinto zibe lula kakhulu lapho uzama ukuthola noma yikuphi okuqukethwe ngaphakathi kwale platform. Uma ushayela futhi ufuna ukucinga ividiyo, ngeke kusadingeka ukuthi ubhale, manje ngokukhuluma nje ungathola ividiyo oyifunayo.
Izinyathelo okumelwe zilandelwe
Balapha ezinye zezinyathelo okufanele zilandelwe Ukwenza ukusesha ngezwi kusuka kunguqulo yedeskithophu ye-YouTube:
Isinyathelo 1: Bheka ukuthi unenketho evunyelwe yini
Into yokuqala okufanele uyenze hlola ukuthi ngabe le nketho isivele yenziwe yasebenza ngaphakathi kwe-akhawunti yakho. Ukuze wenze kanjalo, kufanele ungene ngemvume nge-imeyili yakho ne-password.
Uma usungaphakathi kwepulatifomu kuzodingeka ulungise ukubuka kwakho kubha yokusesha etholakala phezulu kwesikrini. Uma ubheka ifayela le- isithonjana semakrofoni Kusho ukuthi unenketho enikwe amandla nokuthi ungakwazi ukusesha ngezwi ngaphakathi kwepulatifomu.
Isinyathelo 2: Sesha ngezwi
Ngemuva kokuqinisekisa ukuthi ithuluzi linikwe amandla ku-akhawunti yethu qhubeka nokwenza usesho ngezwi ku-Youtube. Ukwenza kulula kakhulu futhi kuyashesha.
Sikweleta nje chofoza isithonjana semakrofoni lokho kuvela ngqo eceleni kwebha yokusesha. Uma kungokokuqala usebenzisa leli thuluzi, kuzovela isikrini sezimvume zakudala. Lapho kufanele wamukele imigomo ukuze uthuthuke.
Manje usungaqala sebenzisa ithuluzi lokusesha ngezwi akukho ukuphazamiseka. Cindezela kumakrofoni bese ukhombisa ukuthi ufuna ukusesha ini ngaphakathi kwepulatifomu.
Kubalulekile khuluma ngokuzwakalayo nangokucacile ukuze i-Youtube ikwazi ukwenza usesho ngempumelelo. Ungasesha noma yikuphi okuqukethwe okufunayo, noma okubhalisele, amavidiyo owathandayo noma ividiyo ekhethekile.
Sebenzisa ithuluzi kusuka ku-App
Abasebenzisi futhi yenza ukusesha ngezwi kusuka kuhlelo lokusebenza lweselula kusuka ku-YouTube. Nakhu ukuthi ungakwenza kanjani:
Vula isicelo kuselula yakho
chofoza ngenhla kwesithonjana semakrofoni (eduze kwebha yokusesha)
Uhlelo lokusebenza ulalele, ngakho mtshele ukuthi yini ofuna ukuyibheka ngaphakathi kwepulatifomu.
Imiphumela ehlukahlukene izovela. Khetha inketho efanele futhi yilokho
1 Sesha ngezwi kuwebhu ye-YouTube
2 Izinyathelo okumelwe zilandelwe
2.1 Isinyathelo 1: Bheka ukuthi unenketho evunyelwe yini
2.2 Isinyathelo 2: Sesha ngezwi
3 Sebenzisa ithuluzi kusuka ku-App
Ungase ube nesithakazelo:
Izincwadi ze-Instagram ukusika nokunameka
Ngisusa noma ngicishe kanjani i-akhawunti yami ye-Pinterest?
Ngingaphumelela kanjani ngePinterest?
Abalandeli be-Twitter $0.00
Abalandeli be-Facebook $0.00
Ababhalisile be-YouTube $0.00
Okthoba 2, 2019
Januwari 28, 2019
Julayi 12, i-2019
Ukwazi iUSA Travel